Supertornado na Supercomputer: Ngosiputara enweta | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Meteorology
Imirikiti oru ngo emere n'ime ihe omumu banyere ihe omimi nke ihu igwe, dika ihe nnukwu akwa mmiri, na-iji na melite amụma ha. Ihe omume a emebere ruru ifufe na-adịgide adịgide nke ihe ruru 320 kilomita kwa awa, gbuo mmadụ 9 ma merụọ ihe ruru mmadụ 200 ahụ na 100 kilomita nke ụzọ.
Ihe oru ngo nke ndi otu Leigh Orf nke ndi nyocha na Cooperative Institute maka Satellite Studies di iche, obu ezie ike ọgwụgwụ nke ọmụmụ ihe, na ohere nke nnukwu kọmpụta (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 6 gachara) kwere ka ha mee nke a ịme anwansị.
Ọ dịghị onye ọkà mmụta sayensị hụtụrụla mbido oké ifufe dị ka nke a. Enyemaka nke kọmitii na-ahụ maka Bluewaters si Mahadum Illinois enyerela aka nke ọma n'ịmepụta oké ifufe nke mere na May 24, 2011.Bluewaters weghachitere ụbọchị atọ iji gbakọọ ịme anwansị na ikekwehie ya nile. Iji mata otu ikike ya dị, kọmputa anyị nwere ike ịnwe n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs, ga-ewe ọtụtụ iri afọ.
Kọmputa kọmputa jiri ezigbo ọnọdụ ihu igwe edere n'oge etolite na mmepe nke oke mmiri ozuzo ahụ. Ha mere ihe banyere nke a ọnọdụ okpomọkụ nke kọlụm ikuku n'ime oke ifufe ahụ, nrụgide nke ikuku, iru mmiri, ma ọ bụ ikuku ikuku.
Ebe na nkedo nke uzo di ugbu a n'ime oke ikuku
E gosipụtara akụkụ dị iche iche nke ọgbọ na mmalite nke oke mmiri na vidiyo. Na mbụ ị pụrụ ịhụ ọgbọ nke nnukwu ụlọ nke bu ihe omumu omumu oke amuma. Ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ ndị a ha na-emepụta obere oke mmiri, nke jikota enye ọsọ na isi eddy nke ahụ ga-emesị bụrụ nnukwu akwa mmiri.
N'otu oge mmiri ozuzo ahụ na-emepụta mmiri ikuku dị jụụ nke na-egosi na ọ na-arụ ọrụ dị ka ụdị siphon, na-eme ka isi ihe pụta. Na SVC (Ugbu a oge na-adịghị anya) Etu esi mara ikuku ikuku a anaghị emetụ oke mmiri ahụ, mana ọ dị ka ọ bụ igwe na-ewepụta ike ya.
Ebumnuche nke oru a bụ ime a nkọwapụta ziri ezi ma tinye ya na ọrụ ndị ọzọ gbasara ihu igwe ka ha nwee ike soro ya rụọ ọrụ.
Mkpa maka ụdị ọmụmụ a:
Ihe ndị ọkà mmụta sayensị maara banyere oké ifufe ndị a na ajọ ifufe nke na-aga na Texas, Florida, na Caribbean, n'etiti ebe ndị ọzọ taa, bụ nwere ike ime na oge kariri ma sie ike.
Dị ka otu nnyocha nke American Journal of Climate Change na-adịbeghị anya si nyochaa, nke na-enyocha ihe omume ihu igwe nke oké ifufe, nke ọma simulated supertorning, na a mụ na ihu igwe dịruru ná njọ, ọ ga-enwe oge nke nlọghachi nke ihe dị ka afọ 900.
Ma mgbe ndị nyocha ahụ lebara anya n’ihe ndị dị ka nsogbu ikuku na okpomoku nke oke osimiri (ha abụọ metụtara mgbanwe ihu igwe), ha na-akwado na oke ifufe nke na-eme kwa afọ 1000, ọ gaghị ewe ogologo oge ahụ ịmeghachi onwe ya.
Ọ dịghị onye na-eme nchọpụta nwere ike ikwu hoo haa, taa, etu mgbanwe ihu igwe ga-esi emetụta oke oke otu oke ifufe. Naanị ha maara na ha kwesịrị chọpụta ihe site na ma na akwagide oké ifufe a ngwa ngwa.
Andnweta ogo na ịdị mma data yana supercomputers siri ike ga-enyere ndị na-ahụ maka ihu igwe aka ịkọwapụta nke ọma ụdị amụma ndị ọzọ.
N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike igosi n'ụzọ nke oke mmiri ozuzo, ọ bụghị naanị na tonado na-eru nso, mana nke ahụ ụdị, si otú a na-abawanye oge ọkwa nke nkita, na-eme ha n'otu aka ziri ezi na ngwa ngwa.
A ga-azọpụta ndụ na ọtụtụ narị ezinụlọ agaghị ata ahụhụ ọ bụla.
Ref: Oké ifufe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Supertornado na Supercomputer: Achọpụtara nnwale
Gịnị mere oké osimiri ji agba agba?